विजुली चोर : कहाँ छ खोर ?
विजुली चोर पत्ता लाग्यो, लोडसेडिङको कारण विजुली चोर रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो । तत्कालीन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा यतिखेर गृहमन्त्रालय सम्हालीरहेका छन्, कूलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नै छन् । यी दुबैले जनताका सामु प्रतिवद्धता जनाएकै हो कि विद्युत चोरलाई कठघरामा उभ्याइनेछ, कुनै प्रकारको कन्सेसन दिइनेछैन, कारवाही हुन्छ ।
विद्युत चोर रहेछन्– मारुती सिमेन्ट कारखाना । रिलायन्स स्पिनिङ, पशुपति सिमप्याक, रघुपति जुटमिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ, शिवम् सिमेन्ट, शिवम् प्लास्टिक्स, हुलास वायर, केपी सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टि फाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक आदिआदि । जसले दैनिक १० करोडको विद्युत चोरी गरेका थिए र आमनागरिकलाई अँध्यारोमा बस्न बाध्य पारेका थिए । यस चोरी प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका मिटर रिडरदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म संलग्न रहेका थिए । यो सब जानकारी त सार्वजनिक भयो, तर कारवाही कसलाई भयो ? केही मिटर रिडरले अपजस भोगे, बाँकी इन्जिनियरदेखि कार्यकारीसम्मलाई देश लुटमा कुनै कारवाही हुनसकेन । यस्तो देशमा न्यायको कुरा गर्ने ?
साउन २१ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की डा.गोविन्द केसीले उठाएका आमनागरिकको हितका आवाज न्यायसंगत छ भनेर सडकमा उत्रिइन् । के चाहियो ? के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने व्यक्तिहरु, न्यायशास्त्रका धुरन्धरहरु, पूर्व न्यायकर्मीहरुले समेत सुशीला कार्कीको विरोध गरेर आत्मरती गरे । न्यायक्षेत्रमा काम गर्नेले न्यायसंगत कुराको समर्थन गर्न पनि नपाउने ? आमजनताको हितको आवाजमा आवाज पनि मिलाउन नहुने ? चुप लागेर बस्नुरे । संचेतन बर्ग, न्याय र अधिकारकर्मीले पनि नबोल्ने हो भने देशमा अन्धकार शासन चल्नेछ, जसले सुशीला कार्कीको विरोध गरे, के तिनीहरु अन्धकार चाहिरहेका छन् ? होइन भने न्यायसंगत कुरामा पदबाट अवकाश पाएका अथवा नागरिक बनेर बसेका सबैले आमनागरिकको हाँमा हाँ मिलाउन जरुरी छ । तव न लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, विभेद हुन्न र न्यायसंगत समाज स्थापित हुन्छ । अन्याय गर्न खोज्नेहरु नैतिक रुपमा पराजीत हुनेछन् र समाज स्वस्थ हुनेछ ।
हो, यिनै खालका व्यक्तिहरुले विद्युत चोरहरुलाई बचाउनु पर्छ भनेर मौन धारण गरे, जसका कारणले देशै अन्धकार पार्नेहरुले छुट पाएका छन् । विद्युत चोरहरु हुन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि कारवाही गर भनेर संचेतन बर्ग, स्वच्छता चाहनेहरुले दबाब दिनसकेको भए आज चोरहरु खोरमा हुनेथिए । चोरको ठूलो स्वर हुनपाउने थिएन । चोरलाई चौतारो दिनुपर्छ भन्नेहरु मौन बस्दा तत्कालीन मन्त्री गृहमन्त्री बनेर मानो पचाइरहेका छन्, कूलमान घिसिङ जो विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी छन्, उनले कारवाही गर्ने कुरै आएन । जसले गर्दा चोरहरुको डाँको ठूलो भएको छ । ठूला नेताहरुलाई चोरहरुले कमिशन दिएर बाइसधारा नुहाएर गौदान गरेजसरी पवित्र हुनपुगेको दु:खलाग्दो दृश्य देखिएको छ ।
जति पनि विद्यूत चोरहरु थिए, ती सबै मारवाडी व्यापारी बर्गका छन् । नाकावन्दीका समयमा कालोबजारी गर्ने केडिया समूह पनि मारवाडी समुदायकै थिए । किन मारवाडी समुदायले व्यापार गर्छ र उसले जे छोए पनि सुन हुन्छ ? भन्ने रहस्य भनेकै कालोबजारी र चोरीव्यापारी हो । व्यापारमा पनि नैतिकता हुन्छ, देशभक्ति हुन्छ । देशलाई नै अन्धकार पारेर अनैतिक रुपमा विद्युत चोरी गर्ने, बालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई खोरमा नहाली स्वच्छ समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न । लोकतन्त्र छ भने चोरलाई खोरमा हाल ।